အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးနေ
အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးနေ
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 16, 2010 in Myanma News, News | 10 comments
ဒီကနေ့ညနေပိုင်း အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းသား ၁၀၀ ကျော်ကိုလွှတ်ပေးနေပါတယ်။ ထောင်ဆရာတော်က တရားပွဲကျင်းပပေးပြီး တရားပွဲအပြီးမှာ လွတ်ရက်နီးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း ထောင်နဲ့နီးစပ်သူ တဦးက ပြောပြသည်။
“အရင် ဦးဥာဏိဿရ တရားပွဲအပြီးမှာ လွှတ်ပေးတုန်းကလည်း တရာကျော်တယ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ထောင်ဆရာတော်တရားပွဲအပြီးမှာလည်း ၁၀၀ ကျော်လွှတ်တယ်။ ခုညနေ လွှတ်တာလည်း ၁၀၀ ကျော်ပဲ လွတ်လာသူတွေကိုမေးကြည့်တော့ သူတို့ လွှတ်ဖို့ နည်းနည်းပဲ လိုတော့တဲ့သူတွေလို့ ပြောတယ်။ ” ဟု ဆိုသည်။
မကြာခင်ရက်ပိုင်းကလည်း အစိုးရသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမဲ့ရက်မတိုင်ခင် အကျဉ်းသား ၁သောင်းကျော်ကို လွှတ်ပေးဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်မရှိပဲ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။
ခုတော့ ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေပဲ လွှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မလွှတ်တာတော့ အစိုးရရဲ့မရိုးသားမှုပဲ။ နောက်ထပ် ဖမ်းချင်သူတွေရှိလို့ ထောင်များကြိုတင်ရှင်းလေသလား စဉ်းစားစရာ မဟုတ်ပါလားဗျာ
ထောင်ရှင်းနေတာကတော့ သေချာလောက်တယ်ဗျ။ဆေးရုံတွေမှာလည်း ရှင်းနေတယ်လေ။နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဆိုတာ ထောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လည်းဗျ။ထောင်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ခိုးတဲ့သူခိုး၊မုဒိမ်းကျင့်တဲ့လူ၊လူသတ်တဲ့လူ စတာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ အဲ့လိုလူမျိုးတွေ ထပ်မရှိလာဖို့ မဟုတ်ဘူးလားဗျ။နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဆိုတာက ပညာရေးမှာထူးချွန်တယ်၊လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတယ်၊အနိုင်ကျင့်တာကိုမကြည့်နိုင်ဘူး၊မျှသမှုကို သဘောကျတယ်။အဲ့လိုမျိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဒီလိုထောင်ထဲကို ထည့်တယ်ဆိုတော့ကာ ထောင်ထဲတွင်းတဲ့ လူပဲရူးနေတာလား၊ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတာလား၊ထမင်းစားပြီးကြီးတာကော ဟုတ်ရဲ့လား၊လူစိတ်မရှိတာလား၊မိဘာမဆုံးမတာလား……ဘယ်လိုတောင်ပြောရမလည်း မသိတော့ပါဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကလည်း သူ့အတွေးနဲ့သူပါပဲလေ………။
လူပျက်တွေ ပြောင်တာကိုသတိရလို့ 
သူတို့တစ်တွေ ပြန်ဝင်ဖို့ နေရာကြိုတင်ပြီး ရှင်းနေကြတာထင်ပါတယ်..။
ဒါ ဘာ မ မ ဟုတ် ၀ူး … သူ တို. နေ ရာ မ ရ ၀ူး ဆို ဒါ သေ ချာ နေ လို. ကြို ပြီး နေ ရာ ရှာ နေ တာ ။
If China and Russia are not governed by the criminal web of gangsters, Than Shwe would have been languishing in the deepest layer of jail long time ago for crime against humanity and genocides. I am not surprised to see the release of criminals and incarceration of political leaders in Burma. Criminal will release the criminals and good men and women had to live in the prison. This is Criminal Than Shwe`s country.
ကျွန်နော်ကွန်းမန့်ဆက်ရှင်မှာ ခင်ဗျားနာမည်ကို ခဏခဏတွေ့နေရလို့ သတိထားမိနေတာ ကြာပါပြီ။ ကွန်မန့်အရေးကောင်းသူ စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ မှတ်ချက်ပြုသူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားဟာ ရှေ့တန်းကတယောက်ပါ။ တခုပဲပြောစရာရှိတယ်၊ အဲဒါက ခင်ဗျားရေးနေတာတွေက အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ သိပ်မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်နော်လည်း ဒီဆိုက်မှာမရေးခင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ သုံးလလောက်အလို အထိက ဗမာလိုမရေးတတ်ခဲ့ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ဘလော့ခ်ရေးနေ ပြောနေကြလည်း ရေးရကောင်းမှန်း မသိခဲ့။ သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးလိုရင် အင်္ဂလိပ်လိုပဲ နှိပ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အာဘော်ကို လူနဲနဲပဲ ဂရုစိုက်တာကို ကိုယ်ကိုတိုင် သူများ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို မဖတ်မိတော့မှ ဗမာလိုရေးရကောင်းမှန်းသိလာတယ်။ ကွန်းမန့်ရေးရင်းနဲ့ အရှိန်တက်ပြီး ကိုယ်ရေးချင်ရာကို စွတ်ရေးတော့တာပဲ။ ခင်ဗျားလည်း ကြိုးစားပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်လက်ကွက်ကို သင်ကြည့်ပါလား။ ကျွန်နော်ဆို ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ တပတ်မပြည့်ခင် ကောင်းကောင်းရေးတတ်သွားတယ်။ ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ အရင်က မပြောဖြစ်တာတွေ မပြောနိုင်ခဲ့တာတွေ ပြောလို့ရမှန်းသိလာလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားလိုစာရေးကောင်းသူရေးဖော် တယောက်ကို မန်းလေးဂေဇက်မှာ မြန်မာလိုရေးတာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ မိတ်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။
I had tried my best to type in burmese but could not manage so far. I understand your comment. It is difficult for our oppressed million to appreciate the language which is not in Burmese. I may have been doing favour for Than Shwe. I will try again to be able to do things on Burmese. Thanks
ဒီထောင် ကလွှတ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး မင်္ဂလာဈေးလူသတ်မှူ့ ခါးပိုက်နှုိက်လုယက် မှု့တွေဟာ ပိုပြီးဖြစ်ပွားစေအောင် ဖန်တီးမှူ့တခုလို့သက်သေပြနေ နိုင်တဲ့အချက်ပါ ၈.၈.၈၈ မှာလဲဒါမျိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီပဲယင်းဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်မတိုင်မှီကလည်း ဒီဂယက်တွေပါဘဲ ဒီတော့ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီးဖွင့် ပြီး ရုပ်သေးရုပ်တွေ ကိုကခိုင်းတဲ့ သဘောပါ ဘဲ…….။
အကြံအစည် တစ်ခု ခုတော့ရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ လွတ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်။